Al Shabaab oo Weeraro Ku Qaaday 4 Magaalo oo Katirsan Gobolka Hiiraan
Wednesday June 14, 2017 - 16:56:41 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay xalay ka dhaceen inta badan degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi ka koobanyahay.
Xalay saqdii dhexe ayay ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab waxay weerar ku qaadeen dhowr saldhig oo ciidamada Jabuuti iyo kuwa Itoobiya uga suganyihiin gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
Ugu horrayn weerar culus ayaa mar qura lagu qaaday Galbeedka iyo Bariga Beledweyne oo ay ku suganyihiin ciidamo Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan ah, dad ku sugan magaalada ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan oo xaafadaha Beled Weyne laysku dhaafsanayay.
Daqiiqado kadib weerar culus ayaa ka bilaawday degmada Buula Burde ee isla gobolka Hiiraan waxaana magaaladaas ku sugan ciidamo katirsan dowladda Jabuuti, dagaalka Buula Burde ayaa ahaa midkii ugu waqtiga dheeraa dagaalladii xalay waxaana la sheegay in khasaara lixaad leh lagu gaarsiiyay ciidamada shisheeyaha AMISOM.
Sidoo kale weerar culus ayuu lakulmay saldhigga ciidamada Xabashida itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka Halgan ee u dhaxeeya magaalooyinka Beled Weyne iyo Buula Burde.
Dhinaca kale weeraro xooggan ayaa markale lagu qaaday saldhigyo melleteri oo ciidamada Jabuuti ay uga suganyihiin degmada Jalalaqsi ee isla gobolka Hiiraan, dad goob joogayaal ah waxay sheegeen in dagaalka Jalalaqsi ay barbar socdeen madaafiic xooggan oo lagu garaacayay bartilmaameedyo AMISOM ah.
illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalladii cuslaa ee xalay ka dhacay degmooyin iyo deegaanno katirsan gobolka Hiiraan.
wariye ku sugan Hiiraan ayaa soo sheegay in dagaalladii xalay ka dhacay illaa 5 magaalo oo gobolka katirsan ay saameyn ballaaran ku yeesheen ciidamada shisheeye, degmada Maxaas ayaa noqotay halka kaliya ee xalay aan lagu weerarin ciidamada shisheeyaha Itoobiya ee duullaanka ku jooga gobolka Hiiraan.